Khadadka wax soo saarka bacriminta yaryar. - YiZheng Makiinado Culus Co., Ltd.
Khadkeena soo-saarka bacriminta dabiiciga ah wuxuu ku siinayaa hagitaan ku saabsan tikniyoolajiyadda wax soo saarka bacriminta, teknolojiyadda iyo rakibidda.
Maalgashadayaasha bacriminta ama beeraleyda, haddii aad hayso macluumaad yar oo ku saabsan wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah oo aaney jirin ilo macaamiil ah, waxaad ka bilaabi kartaa khadka wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah.
Qalabka ceyriinka ah ee loo heli karo wax soo saarka bacriminta dabiiciga ah
1. Saxarada xoolaha: digaaga, saxarada doofaarka, saxarada idaha, heesaha lo'da, digada faraska, digada bakaylaha, iwm.
2, qashinka warshadaha: canab, khal khal, hadhaaga kasaafada, haraaga sonkorta, qashinka biogas, haraaga dhogorta, iwm.
3. Qashinka beeraha: cawska dalagga, burka soybean, budada cudbiyeed, iwm.
4. Qashinka guryaha: qashinka jikada
5, dheecaanka: dhoobada magaalooyinka, dhoobada webiga, dhoobada filterka, iwm.
Kaliya ma bixin karno oo keliya nidaamka xarriiqda soo-saarka bacriminta dabiiciga ah, laakiin sidoo kale waxaan ku siin karnaa hal qalab oo hawsha ku jira sida waafaqsan baahida dhabta ah.
1. Khadka wax soo saarka ee bacriminta dabiiciga ah waxay qaadataa tikniyoolajiyad wax soo saar horumarsan, oo dhameystiri karta soo saarista bacriminta dabiiciga ah markiiba.
2. Qaado granulator gaar ah oo cusub oo shati u leh bacriminta dabiiciga ah, oo leh heerka kala-soocidda sare iyo xoogga walxaha sare.
3. Alaabta ceyriinka ah ee ay soo saarto bacriminta dabiiciga ah waxay noqon kartaa qashinka beeraha, xoolaha iyo digada digaaga iyo qashinka guryaha ee magaalooyinka, isla markaana alaabta ceyriinka ah si weyn ayaa loola qabsan karaa.
4. Waxqabadka deggan, iska caabinta daxalka, xirashada caabbinta, isticmaalka tamarta oo yar, nolosha muddada dheer, dayactirka habboon iyo hawlgalka, iwm.
5. Hufnaan sare, faa'iidooyin dhaqaale oo wanaagsan, maaddooyin yar iyo dib-u-habeyn.
6. Qaabeynta qaabeynta wax soo saarka iyo soo saarista ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
1. Mashiinka laba-dhudhunka ah
Mashiinka laba-dhudhunka ah wuxuu adeegsadaa walxo budo ah sida dambaska qallalan oo biyo lagu walaaqay si siman loo huuriyo walxaha budada ah ee dambaska qalalan, si maadada qoyan aysan u kicin dambaska qallalan oo aysan uga soo bixin dhibcaha biyaha, si ay ugu fududaato gaadiidka rar dambas qoyan ama u wareejin qalab kale oo gaarsiin kara.
2. A granulator cusub oo bacrimiya
A granulator cusub oo bacrimiye dabiici ah ayaa loo adeegsadaa kala soocida digada digaaga, digada doofaarka, digada lo'da, kaarboonka madow, dhoobada, kaolin iyo waxyaabo kale. Waxyaabaha dabiiciga ah ee ka kooban walxaha bacriminta waxay gaari karaan 100%. Cabbirka walxaha iyo isku mid ahaanta ayaa lagu hagaajin karaa iyadoo loo eegayo xawaaraha gudbinta.
Awood （t / h）
Saamiga cufnaanta jirka
Awoodda matoorka (kW)
Cabbirka LW - sare (mm)
3. Qalajiyaha duuban
Qalajiyaha wax lagu duubo waxaa loo isticmaalaa in lagu qalajiyo qaybaha bacriminta Saxanka kor u qaadida gudaha wuxuu si isdaba joog ah kor ugu qaadayaa una tuurayaa qaybaha wax ka sameysmaya, si maadadu ay xiriir buuxa ula leedahay hawada kulul si loo gaaro ujeedada qalajinta lebiska.
Ka dib markii la rakibey
Cabbirka qaab (mm)
Xawaaraha rog (r / min)
4. Qaboojiyaha meeldhexaadka ah
Qaboojiyaha qaboojiyaha waa mashiin weyn oo qaboojiya isla markaana kululaanaya qaybaha bacriminta ee la qaabeeyey ka dib markii la qalajiyo. Iyadoo la yareynayo heerkulka walxaha bacriminta ee caaryada leh, ayaa sidoo kale biyaha la yareeyay. Waa mashiin weyn oo lagu kordhiyo xoogga qaybaha wasakhda bacriminta.
5. Booqday Furimaha Dagaalka ah Literiform
Qalabka burbura silsiladda toosan wuxuu korsadaa silsilad carbide-adkaysi u leh xoog-kar ah oo leh xawaare isku mid ah oo ku saabsan geeddi-socodka, taas oo ku habboon shiidaya alaabada ceeriin iyo soo-saarista wax soo saarka bacriminta.
Cabirka ugu badan ee quudinta (mm)
Ka dib markii la burburiyo cabirka walxaha (mm)
Awooda matoorka （kw）
Awood wax soo saar （t / h）
6. Kala shaandheeye
Mashiinka mashiinka shaandhada wax lagu shaandheeyo ayaa loo isticmaalaa in lagu kala saaro qaybaha bacriminta iyo qaybaha bacriminta ee tayada liita.
7. Mashiinka wax lagu duubo ee otomaatiga ah
Adeegso mashiinada bacriminta bacriminta otomaatiga ah si aad ugu duubtid walxaha bacriminta dabiiciga ah qiyaastii 2 ilaa 50 kiilogaraam halkii jawaan.
Isticmaalka hawada Hawada （m3 / h）
Cadaadiska isha hawada （MPa）
Bacda tallaalka / mitirka tallaabada
Guud ahaan cabirka